Waalidiinta Ardayda Abaarso Tech oo beeniyay Dhaqan-xumo lagu sheegay inay ka jirto Dugsigaas | Somaliland.Org
Waalidiinta Ardayda Abaarso Tech oo beeniyay Dhaqan-xumo lagu sheegay inay ka jirto Dugsigaas
December 18, 2012	Hargaysa, (Somaliland.Org)- Guddiga waalidiinta ardayda dugsiga Abaarso Tech ayaa jawaab adag ka bixiyay dhaqan xumo lagu sheegay inay ka jirto dugsigaas oo ay ubadkoodu wax ka bartaan.Waxaanay Culimo -awdiinka Somaliland. xukuumadda iyo waxgaradka kale ee bulshada ugu baaqeen, isla markaana ay ku marti-qaadeen inay soo booqdaan dugsiga Abaarso Tech. si ay indhahooda ugu soo arkaan xaqiiqada ka jirta.
Guddiga waalidiinta ardayda Abaarso Tech oo shir jaraa’id ku qabtay galabta Huteelka iempial ee magaalada Hargaysa ayaa ka hadlay hanaanka waxbarasho ee dugsigaas iyo waliba qaybaha kala duwan ee ardaydaasi ay ku bartaan.
Ugu horayn guddoomiyaha waalidiinta Nimco Cismaan Ducaale oo halkaa ka hadashay ayaa sheegtay in waalidiin ahaan ay toos ugu xidhan yihiin dugsiga boodhinka ah ee ay ubadkoodu dhigtaan, isla markaana ay ogyihiin siday wax u bartaan iyo dhaqanka ardayda labadaba.
Waxaanay gudoomiye Nimco Cismaan Ducaale hadalkeeda ku bilawday. “Waxaanu idiinku yeedhnay, isla markaana aanu shirkan jaraa’id u qabanay haddaanu nahay guddiga waalidiinta dugsiga Abaarso Tech markaanu u adkaysan waynay ceebaynta iyo cayda maalmahanba carruurtayada waxbarashada noogu jirta lagu faafinayo qaar ka mid ah website-yada iyo wargeysyada ee lagu caayayo laguna sheegayo waxaanay ubadkayagu ahayn, waxaa maalmahanba la qorayay oo waliba ay qorayeen wargeyska Waaheen iyo website-ka halbeeg in carruurtayada halkaa wax nooga baranaysa lagu baro dhaqan xumo iyo gaalayn, isla markaana xashiishad dugsigaas lagu beera, taasoo aanay waxba ka jirin, dugsiga waxa ku jira laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho halkaana waxay ku bartaan aqoontii ugu wanaagsanayd ee waalid ubadkiisa gayn lahaa.
Guddoomiyaha guddiga waalidiinta oo ka hadlaysa xidhiidhka wadashaqayneed ee dugsiga Abaarso Tech iyo Wasaaradda waxbarashada Somaliland ka dhexeeya iyo doorka ay dawladu dugsigaas ku leedahay waxay tidhi. “Dugsigu waa mid gaar loo leeyahay oo waafaqsan manhajka Somaliland, isla markaana ay wasaaradda waxbarashada Somaliland ogtahay waxa lagu dhigto manhajkiisana ogtahay waxaana wax ka dhiga macalimiin wasaaradda waxbarashada ka tirsan oo ardayda bara diinta iyo dhaqanka suuban ee Islaamka iyo macalimiin ajaanib ah oo luuqadaha kale ee ay wax ku bartaan u dhiga.”
Guddoomiyaha oo ka hadlaysay waxyaabaha dugsigaas lagu sheegay iyo sidaanay waxba uga jirin ayaa aad ugu dheeraatay sida aanu waalidna uga raali ahayn in ubadkoodu dhaqan xumo bartoiskaba daayoo xataa in maalin lagu sheego inaanay raali ka ahayn. Waxaanay intaa ku dartay in waalidku markastaba ku dedaalo sidii uu u dhisi lahaa mustaqbalka ilmihiisa, isla markaana u barbaarin lahaa.
Waxaanay marwo Aamina Cismaan oo arrimahaa ka hadlaysaa tidhi. “Waxaanu ka koobanahay 200 oo arday waalidkood oo hooyo iyo aabboba leh sinabana noogama suurawdo inaanu ubadkayga ku daawano dhaqan xumo markaa waxaan xukuumadda iyo hay’adaha garsoorkaba ka codsanaynaa in sharciga lasoo hor taago dadka waxaa beenta ah qoray ee waliba hableheenii ku sheegay in caasimaddeena dhaqan xumo lagu barayo. Waxa kale oo taas kasii daran been abuurka aan loo aabbo yeelin ee qarankeena lagula kacay ee lagu sheegay in dugsigaas lagu beeray xashiishad.”
Waxa kale oo halkaa ka hadlay Xasan Maxamed Jaamac oo sheegay in dugsigaas ardayda dhigataa ay yihiin kuwa dalka ugu aqoonta iyo akhlaaqda wanaagsan, kuwaasoo laga soo xulay ardaydii ugu saraysay imtixaankii dugsiyada dhexe fasalka sideedaad, isla markaana waliba imtixaan laga qaaday oo intii ugu saraysay ee dalka Somaliland ay galeen, kuwaasoo maanta heer wanaagsan aqoonta ka maraya .waxaanu xukuumadda ku amaanay gacanta ay siiso dugsigaas gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo dugsiga gaysay macalimiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo dhiga Diinta iyo Carabiga.
Ugu dambayn wuxuu ugu baaqay culimada Somaliland inay la soo eegaan dugsigaa si ay uga qayb qaataan wacyiganta wanaagsan ee bulshada, Waxaanay waalidiintu dhamaantood isku raaceen cidii waxa qortay inay tahay shaqsiyaad dano gaar ah leh oo qalinkooda ku duminaya qarannimada Somaliland ugu dambayna waxay xukuumadda ka codsadeen in si xun wax u sheega dalka duminaya laga qabto.
Magacyada gudiga waalidiinta
1- Aamina Cismaan Ducaale.
2- Caasha Maxamed Axmed.
3- Hoodo Saleebaan Jaamac.
4- Ifraax Cismaan Axmed.
5- Xaali Caydiid Ismaaciil.
6- Basra Cismaan Xuseen.
7- Nimco Ismaaciil Aw Cabdi.
8- Sucaad Cali Ileeye.
9- Dayib Maxamed Nuur
10- Xasan Maxamed Jaamac.
11- Caaqil C/raxmaan Xuseen Xasan
12- Axmed Maxamed Diiriye
Previous PostTahniyad Meher WacanNext PostProf. Axmed Samatar Oo Faah-faahiyay Hungadii uu kala soo noqday Soomaaliya	Blog